ग्राउन्ड जीरो : बजारमा करेक्सनको दबदबा, लगानीकर्ता भन्छन्, ‘डन्ट बी प्यानिक, होल्ड टाइट्ली’ Bizshala -
काठमाण्डौ । सधैँजस्तै आज आइतबार पनि हामी ग्राउन्ड जीरो सेसनमा विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुगेर लगानीकर्ताका विचार तथा गतिविधि नियाल्ने प्रयासलाई जारी राख्यौँ। केही दिनदेखि करेक्सन आएको बजारमा लगानीकर्ताको उपस्थित बाक्लै देखिन्थ्यो भने अब के होला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै थियो।
यसै सिलसिलामा हामी आज राजधानीको केन्द्र सुन्धारास्थित सुन्धारा सेक्युरिटिज प्रालि ब्रोकर नं. ५२ मा बिहान ११ बजे नै पुग्यौँ। विगत केही दिनदेखि बजारमा करेक्सन आएकाले ब्रोकर हाउसमा एक किसिमको सन्नटाजस्तै छाएको थियो । लगानीकर्तामा केही छटपटी देखिन्थ्यो । कोही बेलाबेला पानी पिउँदै थिए भने कोही बेलाबेला शौचालयतिर धाउँदै थिए। यत्तिकैमा एक पुरानो लगानीकर्ताले आफ्नो आइप्याडमा हेर्दै मुन्टो हल्लाउँदै भने, ‘आज बजारको लक्षण राम्रो छैन फर्केलाजस्तो छैन।’
त्यत्तिकैमा आडैमा बसेको लगानीकर्ताले भने, ‘मैले त एनआईसी एसियाको ८८० मा किन्न बसेको आउँछ कि के हो ?’
अर्का लगानीकर्ता भने, ‘यस्तो बेला त जति सकिन्छ किन्ने हो, बैंकको सेयर त के बढेको छ र ?’
यतिबेला मध्याह्नको १२ बजिसकेको थियो। बजारमा ५० अंकसम्मको करेक्सन आइसकेको थियो। एक नयाँ लगानीकर्ताले सोधे, ‘के गर्ने खोइ ?’
आडमै बसेका अर्का लगानीकर्ताले जबाफ दिए, ‘होल्ड टाइट, होल्ड टाइट ।’
अब भने ब्रोकर हाउसमा चिया बाँड्न थालियो। नयाँ लगानिकर्ता सेयर बेच्न ओइरिरहेका थिए। यत्तिकैमा आर्मी डे«समै केही लगानीकर्ता पनि छिरे र केही सोधपुछ गर्दै थिए ।
करिब एक घन्टाको बसाइपछि हामी पुतलीसडकस्थित अनलाइन सेक्युरिटिज स्टक ब्रोकर नं. ४९ मा पुग्यौं । त्यहाँ पनि लगानीकर्ताको बाक्लै उपस्थिति थियो । गार्डले काम सोधेर आवश्यकलाई मात्रै भित्र पठाउँदै थिए ।
भित्र एक लगानिकर्ताले निफ्राको सेयर देखाउँदै सोधे, ‘यो के गर्ने होला ?’
छेउमा बसेका अर्का लगानीकर्ताले भने, ‘मैले त किन्दा पनि किन्दिनँ, आईपीयो बेच्दा पनि बेच्दिनँ । जेसुकै होस् ।’
त्यत्तिकैमा एकजना नयाँ लगानीकर्ता आए र निफ्राको सेयर ५१५ मा बेच्ने आदेश दिए ।
केहीबेरको बसाइपछि हामी पुतलीसडकमै रहेको स्टक ब्रोकर नं. १६ प्राइमो सेक्युरिटिजमा पुग्दा लगानीकर्ता आफ्नो मोबाइल तथा ल्यापटपमा बजार हेरेर मस्त थिए । एक लगानीकर्ताले भने, ‘मैले अघिल्लो हप्ता महुली लघुवित्तको सेयर किनेको छु, २० प्रतिशत लाभांश अझै बाँकी छ ।’
त्यत्तिकैमा आडैमा बसेका अर्का लगानीकर्ता ‘आजै हो मौका’ भन्दै छिमेक लघुवित्तको सेयर किन्न दौडिए । सँगै बसेका एक लगानीकर्ता भने आत्तिँदै सोधे, ‘होल्ड अर सोल्ड ? ह्वाट टु डु ?
अर्का लगानीले भने, ‘वइट एन्ड वाच, होल्ड टाइट्ली ।’
सोही ब्रोकर हाउसमा एक लगानीकर्ताले सोधे, ‘आजको बजार नरमल करेक्सन हो कि केही न्युज छ ?’
आडैमा बसेका लगानीकर्ताले भने, ‘डन्ट बी प्यानिक ।’
केही समयको बसाइपछि हामी अनामनगरस्थित प्रिमियर सेक्युरिटिज स्टक ब्रोकर नंं. ३२ मा पुग्यौँ। त्यहाँ पनि लगानीकर्ता खरिदबिक्रीमै व्यस्त थिए। एक लगानीकर्ताले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई जोड्दै भने, ‘सरकार कांग्रेसको भए पनि अर्थमन्त्री रामशरण महत नै हुने हुन्, केको डर ?’
त्यत्तिकैमा एक लगानीकर्ताले फोनमा भने, ‘किन्नुस् है ! सस्तो–सस्तो गरिमा बैंक र कुमारी बैंक ।’
सीईडीबी हाइड्रोपावरले पायो रु. २५.१८ करोडको आईपीओ निष्कासनको अनुमति